News - Sidee loo kala saaraa burushyada dhabta ah iyo kuwa been abuurka ah?
Sidee loo kala saaraa burushyada dhabta ah iyo kuwa been abuurka ah?
Mid ka mid ah burushyada ka soo burush buraashka oo dab ku gub. Waxaa jira ur gubanaya inta lagu jiro hawsha gubashada, waxayna isu rogaysaa dambas ka dib gubashada. Tani waa bristles dhabta ah. Burushka been abuurka ahi waa kuwo aan dhadhan lahayn ama waxay leeyihiin ur caag ah markay gubanayaan. Markii la gubay ka dib, dambas iskama beddelayaan, laakiin dhoobo.
Qoyan nabarrada, barafka dhabta ahi wuu jilicsan doonaa ka dib markuu qoyo, mana jiro qoyaan dusha sare ee timaha, timuhuna waxay dareemi doonaan qoyaan taabashada ah. Burcadka beenta ahi ma noqon doono kuwo jilicsan ka dib marka la qoyo, oo dusha sare ee duudduubkuna wali wuu ka madhnaan doonaa qoyaan, waxayna dareemi doonaan qalalan taabashada iyaga oo aan lahayn wax dareen ah oo qoyan.
Xadhkaha dhabta ah ee jilicsan ayaa kululaada ka dib marka la qoyo, waxaana jiri doona ur gaar ah marka aad la kulmeyso biyo kulul ama hawo kulul, laakiin nacasyada jilicsan ee jilitaanka ahi ma dhacaan.
Habka taabashada gacanta
Xadhkaha jilicdintu way jilicsan yihiin taabashada mana laha dareen ah inay gacmaha is qabsadaan. Way jilicsan yihiin oo way jilicsan yihiin gacanta, halka xajmiga xayawaanka been abuurka ah ay ka adag yihiin oo ay ka maqan yihiin adkeyn iyo dabacsanaan.